हाम्रो ८ गल्ती, जसले कलेजो खराब गर्छ | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
हाम्रो ८ गल्ती, जसले कलेजो खराब गर्छ
कसरी राख्ने कलेजोलाई स्वस्थ्य
कलेजोले कैयौं काम गर्नुपर्छ, हाम्रो शरीरको लागि । यो शरीरको सबैभन्दा ठूलो भित्री अंग पनि हो, जसको लम्बाई लगभग ६ इन्च हुन्छ । तौल सावा किलोदेखि डेढ किलोसम्म हुन्छ । यो हाम्रो पेटको माथि दाहिनेतर्फ हुन्छ ।
किन खराब हुन्छ कलेजो ?
शारीरिक स्वास्थ्यका लागि यति महत्वपूर्ण कलेजो खराब त्यसबेला हुन्छ, जब हाम्रो खानपान र जीवनशैली प्रतिकुल बन्छ । युनिभर्सिटी अफ पेनसिल्वेनिया स्कुल अफ मेडिसिनको एक अभ्ययन अनुसार हाम्रो खराब जीवनशैलीको सोझो असर कलेजोमा पर्छ । औसत ४० बर्षको उमेरसम्म कलेजोको प्रणालीमा २० प्रतिशतसम्म गिरावट आइसकेको हुन्छ । तर, शरीरमा धेरै मात्रामा टक्सिन भयो भने कलेजो खराब हुन्छ ।
३. मदिराजन्य पदार्थ त कलेजोको सत्रु नै हो । जब हामी मदिरा पिउँछौ, शरीरमा विषाक्त पदार्थ बढी जम्मा हुन्छ । यसले कलेजोलाई नराम्ररी क्षति पुर्‍याउँछ ।
४. चिकित्सकको परामर्श बिना सप्लिमेन्ट खासगरी भिटामिन ए लिनु कलेजोलाई हानी पुर्‍याउनु हो ।
६. कोक, फ्यान्टा जस्ता पेयमा कृतिम चिनी र रंग प्रयोग गरिएको हुन्छ । यसले गर्दा कलेजोमा बोजो जम्छ । रंगको रसायनले कलेजोलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ ।
७. बर्गर, स्यान्डविच जस्ता जंकफुडको सेवनले पनि कलेजोको कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याउँछ ।
कलेजोलाई स्वस्थ्य राख्ने १० काइदा
अहिलको खानपान शैलीले सबैभन्दा बढी कलेजोमा असर गरेको छ । हावर्ड मेडिकल स्कुलको अध्ययनले यहि तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । हामीलाई थाहै छ, शरीरमा पैदा हुने विकारयुक्त तत्व सफा गर्ने काम कलेजोले गर्छ । त्यही कारण कलेजोमा यस्ता तत्व जम्मा हुन्छ, जसलाई सफा गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ ।
लसुनलसुनमा सेलेनियम हुन्छ, जसले कलेजोमा रहेको हानिकारक टक्सिन सफा गर्न सघाउँछ ।
यसमा ग्लूकोज हुन्छ, जो कलेजोलाई स्वस्थ्य राख्न आवश्यक हुन्छ ।
बन्दामा रहेको सल्फरले कलेजोको फोहोर हटाउन सहयोग गर्छ ।अनलाइनखबर
7/14/2017 04:24:00 PM